Ungayitshintsha njani ifolda ngaphakathi Windows 10
Ukugula kwegama lefayile okanye igama lefolda ngaphakathi Windows 10? Emva koko tshintsha. Cofa nje ekunene kwi icon ekhubekisayo uze ukhethe Qamba ngokutsha kwimenyu ephumayo. IWindows ibalaselisa igama elidala lefayile, elinyamalalayo njengoko uqala ukuthayipha entsha. Cinezela u-Enter okanye ucofe i-desktop xa ugqibile, kwaye ucimile.
i-amoxicillin clav 875-125
Okanye unokucofa igama lefayile okanye igama lefolda ukuyikhetha, linda umzuzwana, kwaye ucofe igama kwakhona ukutshintsha. Abanye abantu bacofa igama kwaye bacinezela F2; IWindows ngokuzenzekelayo ikuvumela ukuba unike igama kwakhona kwifayile okanye kwifolda.
Xa unika igama kwakhona ifayile, ligama lalo kuphela elitshintshayo. Umxholo usafana, ifayile isalingana ngobukhulu, kwaye ifayile isekwindawo enye.
Ukunika igama kwakhona amaqela amakhulu kwiifayile ngaxeshanye, zikhethe zonke, cofa kwindawo yokuqala, kwaye ukhethe Qamba ngokutsha. Chwetheza igama elitsha kwaye ucinezele u-Enter, kunye neeWindows ezinika igama kwifayile. Nangona kunjalo, ikwabiza kwakhona yonke ifayile yakho enye kukhethwe iifayile kwigama elitsha, ukongeza inani njengoko lihamba:ikati,ikati (2),ikati (3),ikati (4), kwaye nangokunjalo. Yindlela elula yokutshintsha iifoto.
amayeza entlungu ngenxa yeentlungu zomqolo
Ukutshintsha ezinye iifolda kuyayiphazamisa iWindows, ngakumbi ukuba ezo folda ziqulathe iinkqubo. Kwaye nceda ungazibizi ngokutsha iifolda zakho eziphambili: Ukhuphelo, amaXwebhu, imifanekiso, uMculo, okanye iiVidiyo.
IiWindows azikuvumeli ukuba unike igama kwakhona kwifayile okanye kwifolda ukuba enye yeenkqubo zakho iyayisebenzisa ngoku. Ngamanye amaxesha ukuvala inkqubo kulungisa ingxaki. Ngamanye amaxesha, kufuneka uqale kabusha iPC yakho. Ikhupha inkqubo yokuhlangana ukuze ukwazi ukuyinika igama elitsha.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-mucinex
imoto ayizukucofa isandi
iziphumo ebezingalindelekanga ze-amlodipine
leliphi ithamo eliphezulu le-melatonin
iziphumo ebezingalindelekanga ze-enbrel